ပါတီမိတျဆကျ (ကယနျးအမြိုးသားပါတီ) – Voice of Myanmar
လာမယျ့ ၂၀၂၀ နိုဝငျဘာလ ၈ရကျနေ့ ရှေးကောကျပှဲမှာဝငျပွိုငျမယျ့ ကယနျးအမြိုးသားပါတီ ပွောရေးစိုခှငျ့ရှိသူ ဦးခှနျးကလေးမငျးကို VOMသတငျးထောကျ လဲ့လဲ့ဝငျးက မေးမွနျးထားတာဖွဈပါတယျ။
VOM – ပါတီအနနေဲ့ ဝငျပွိုငျမယျ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဘယျလောကျအရအေတှကျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကိုတငျထားလဲ?
ဦးခှနျးကလေးမငျး – ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ကိုယျစားလှယျ ၁၀ယောကျရှိပါတယျ။
ဦးခှနျကလေးမငျး – ၂၀၂၀ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲကနေ ကယနျးအမြိုးသားပါတီအနနေဲ့ ပွညျသူတှကေို ကတိပွုပွီး ရပျတညျသှားမယျ့အရာတှကေတော့ ကယနျးဒသေအပါအဝငျ ကရငျနီပွညျနယျအတှငျးက လူထုတှရေဲ့ စားဝတျနရေေး ပိုမိုပွလေညျစဖေို့အတှကျ တောငျသူတှရေဲ့ သီးနှံဈေးကှကျနဲ့ ကြေးလကျတှရေဲ့ လမျးပနျးဆကျသှယျရေး ပိုမိုကောငျးမှနျစဖေို့ ဦးစားပေးကွိုးပမျးဆောငျရှကျသှားမယျ။ နောကျတဈခကျြက ခှဲခွားခွငျးမရှိဘဲ ကလေးသူငယျတှရေဲ့ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး စတဲ့ အခွခေံပံ့ပိုးမှုတှေ ပိုမိုကောငျးမှနျမြှတစရေမယျ့အပွငျ လူငယျမြိုးဆကျသဈတှအေတှကျ ဝငျငှနေဲ့ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးတှေ ပိုမိုရရှိစဖေို့ လုပျဆောငျသှားမယျ။ နောကျပွီး ကယနျးလူမြိုးတှနေထေိုငျရာ မွို့နယျအသီးသီးအတှကျ အစိုးရရဲ့ နှဈစဉျအသုံးစာရိတျ(ဘတျဂကျြ)တှေ တိုးမွှငျ့ခပြေးနိုငျရေးနဲ့ အဲ့ဒီဘတျဂကျြတှကေိုလညျး ပှငျ့လငျးထိရောကျစှာ သုံးစှဲနိုငျရေးကို ကွိုးပမျးဆောငျရှကျသှားမယျ။ လူထုတှရေဲ့အနာဂတျ ပိုမိုကောငျးမှနျစဖေို့အတှကျ ကယနျးလူမြိုးမြားနထေိုငျရာ ဒသေအားလုံးကို နယျမွတေဈခုတညျးမှာ ပွနျလညျပေါငျးစညျးနိုငျရေးကိုလညျး ဗြူဟာကကြ စတငျလုပျဆောငျသှားမယျ။ နောကျတဈခုက လူငယျတှေ ၊ တောငျသူတှေ၊ အမြိုးသမီးတှေ စတဲ့အုပျစုအသီးသီးရဲ့ အခွခေံရပိုငျခှငျ့၊ မွယောအခှငျ့အရေး နဲ့ လှတျလပျမှု အခှငျ့အရေးတှကေို ရပျတညျကာကှယျသှားမယျ့အပွငျ ကယနျးလူမြိုးနညျးတူ လူနညျးစုတိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ စာပေ၊ ယဉျကြေးမှု၊ ယုံကွညျကိုးကှယျမှုတှကေို ပံ့ပိုးကူညီဆောငျရှကျသှားမယျ။ နောကျဆုံးတဈခုကတော့ ပွညျထောငျစုမွနျမာနိုငျငံမှာ လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ ဒီမိုကရစေီစနဈ အပွညျ့အဝရရှိရေးအပွငျ တိုငျးရငျးသားတနျးတူအခှငျ့အရေးကို အာမခံပေးနိုငျတဲ့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီစနဈ ဖွဈပျေါလာရေးအတှကျ အစှမျးကုနျ ပါဝငျရပျတညျ ဖျောဆောငျသှားမယျ။
VOM – အာဏာရပါတီနဲ့ ပွညျခိုငျဖွိုးကို ဘယျလိုအငျအားနဲ့ ယှဉျပွိုငျမလဲ။
ဦးခှနျကလေးမငျး – ရှမျးပွညျနယျ၊ ကယားပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျမှာ ယှဉျပွိုငျမယျ။ ရှမျးပွညျနယျရဲ့ အဓိကယှဉျပွိုငျဖကျက ပွညျခိုငျဖွိုးနဲ့ အနျအယျလျဒီ။ ကယားပွညျနယျ အဓိကကတော့ NLD၊ ကရငျပွညျနယျကတော့ ကရငျပွညျထောငျစုပါတီနဲ့ NLD။ ကနြျောတို့က အမြိုးသားရေးတညျဆောကျထားတော့ ကိုယျ့လူမြိုးတှရေဲ့ အမြိုးသားရေးအာနဲ့ ယှဉျပွိုငျမှာပါ။
VOM – ပါတီဝငျအငျအားဘယျလောကျရှိလဲ။
ဦးခှနျကလေးမငျး – ပါတီဝငျ (၇၃၀၀) ကြျောလောကျရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ကပါတီအငျအား အဓိကမထားဘူး၊ မဲဆန်ဒကို အဓိကထားတာပါ။
VOM – ပါတီရဲ့ဆောငျပုဒျတှကေပါတှလေဲ
ဦးခှနျကလေးမငျး – တနျးတူရေးမှ ဖကျဒရယျဆီ ကယနျးပါတီရှဖေားဆညျ။
ကယနျးအမြိုးသားပါတီဟာ ၂၀၁၀ခုနှဈ မလေကတညျးက ပါတီမှတျပုံတငျရရှိခဲ့တဲ့ပါတီတဈခုဖွဈပါတယျ။
#voiceofmyanmar #VOM #ကယနျးအမြိုးသားပါတီ
လာမယ့် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မယ့် ကယန်းအမျိုးသားပါတီ ပြောရေးစိုခွင့်ရှိသူ ဦးခွန်းကလေးမင်းကို VOMသတင်းထောက် လဲ့လဲ့ဝင်းက မေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
VOM – ပါတီအနေနဲ့ ဝင်ပြိုင်မယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဘယ်လောက်အရေအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ထားလဲ?
ဦးခွန်းကလေးမင်း – ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ် ၁၀ယောက်ရှိပါတယ်။
ဦးခွန်ကလေးမင်း – ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကနေ ကယန်းအမျိုးသားပါတီအနေနဲ့ ပြည်သူတွေကို ကတိပြုပြီး ရပ်တည်သွားမယ့်အရာတွေကတော့ ကယန်းဒေသအပါအဝင် ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်းက လူထုတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး ပိုမိုပြေလည်စေဖို့အတွက် တောင်သူတွေရဲ့ သီးနှံဈေးကွက်နဲ့ ကျေးလက်တွေရဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ ဦးစားပေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်။ နောက်တစ်ချက်က ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စတဲ့ အခြေခံပံ့ပိုးမှုတွေ ပိုမိုကောင်းမွန်မျှတစေရမယ့်အပြင် လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ဝင်ငွေနဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုမိုရရှိစေဖို့ လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ နောက်ပြီး ကယန်းလူမျိုးတွေနေထိုင်ရာ မြို့နယ်အသီးသီးအတွက် အစိုးရရဲ့ နှစ်စဉ်အသုံးစာရိတ်(ဘတ်ဂျက်)တွေ တိုးမြှင့်ချပေးနိုင်ရေးနဲ့ အဲ့ဒီဘတ်ဂျက်တွေကိုလည်း ပွင့်လင်းထိရောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးကို ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်။ လူထုတွေရဲ့အနာဂတ် ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် ကယန်းလူမျိုးများနေထိုင်ရာ ဒေသအားလုံးကို နယ်မြေတစ်ခုတည်းမှာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ရေးကိုလည်း ဗျူဟာကျကျ စတင်လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ နောက်တစ်ခုက လူငယ်တွေ ၊ တောင်သူတွေ၊ အမျိုးသမီးတွေ စတဲ့အုပ်စုအသီးသီးရဲ့ အခြေခံရပိုင်ခွင့်၊ မြေယာအခွင့်အရေး နဲ့ လွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေးတွေကို ရပ်တည်ကာကွယ်သွားမယ့်အပြင် ကယန်းလူမျိုးနည်းတူ လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေကို ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် အပြည့်အဝရရှိရေးအပြင် တိုင်းရင်းသားတန်းတူအခွင့်အရေးကို အာမခံပေးနိုင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အစွမ်းကုန် ပါဝင်ရပ်တည် ဖော်ဆောင်သွားမယ်။
VOM – အာဏာရပါတီနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို ဘယ်လိုအင်အားနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မလဲ။
ဦးခွန်ကလေးမင်း – ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်မှာ ယှဉ်ပြိုင်မယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ အဓိကယှဉ်ပြိုင်ဖက်က ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ။ ကယားပြည်နယ် အဓိကကတော့ NLD၊ ကရင်ပြည်နယ်ကတော့ ကရင်ပြည်ထောင်စုပါတီနဲ့ NLD။ ကျနော်တို့က အမျိုးသားရေးတည်ဆောက်ထားတော့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေရဲ့ အမျိုးသားရေးအာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှာပါ။
VOM – ပါတီဝင်အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲ။
ဦးခွန်ကလေးမင်း – ပါတီဝင် (၇၃၀၀) ကျော်လောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ကပါတီအင်အား အဓိကမထားဘူး၊ မဲဆန္ဒကို အဓိကထားတာပါ။
VOM – ပါတီရဲ့ဆောင်ပုဒ်တွေကပါတွေလဲ
ဦးခွန်ကလေးမင်း – တန်းတူရေးမှ ဖက်ဒရယ်ဆီ ကယန်းပါတီရွှေဖားဆည်။
ကယန်းအမျိုးသားပါတီဟာ ၂၀၁၀ခုနှစ် မေလကတည်းက ပါတီမှတ်ပုံတင်ရရှိခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #ကယန်းအမျိုးသားပါတီ